Konferensi: zvavari, mhando uye zvimwe - Self Rubatsiro Zviwanikwa | Kuzvibatsira Zviwanikwa
Musangano musangano apo vanhu vane hunhu hwakasiyana vanopokana kana kubata nhaurwa dzakasiyana dzevanhu, dzezvakatipoteredza, dzezvematongerwo enyika, dzesainzi, nezvimwe. Mune ino kesi, isu ticha tarisa pane zvinokurudzirwa pane chaiwo maratidziro pamararamiro, kuzvibatsira, kukurudzira pachako uye zvese zvinoreva kuzvivandudza.. Mune iyi mhando yemusangano, iwe unowana zvinonakidza kwazvo kuratidzira uye nhaurirano pamarudzi ese ezve nyaya zvinogona kukubatsira iwe kugadzirisa akasiyana matunhu ehupenyu hwako.
Misangano yekukurudzira inozivikanwa nekuti inotungamirwa nemunhu mumwe chete, mudzidzisi. Rudzi urwu rwemusangano rwunosiyaniswa kubva kune rwevamwe, vezvematongerwo enyika, sainzi kana gakava mhando, pakati pevamwe, nekuti mudzidzisi anotaura kuvanhu vese chete. Munhu uyu anoshandisa toni yezwi, kuchinjika, uye mutauro wemuviri wakagadzirwa kuti ugadzire vateereri.
Kubudikidza nemibvunzo yakabvunzwa nevanhu vanopinda misangano iyi, data rinounganidzwa iro rinobatsira mukuwedzera hurukuro yemudzidzisi. Sezvinei, kuyedza kunoitwa kugadzira mamiriro epedyo, uko vanhu vanonzwa kuti vanonzwisiswa nevamwe vanopinda uye kwavanowana mumazwi emutauri, kurudziro yavanoda panguva iyoyo.
Nekuti kuburikidza nezviitiko zvevamwe vanhu, unogona kuwana kurudziro iwe yaunoda kuti uchinje hupenyu hwako munguva yekuoma kwakakosha. Sayenzi yakaratidza kuti, munguva dzekutambudzika, uyo anopona haasi iye akasimba, asi iye anoziva kugadzirisa mamiriro ezvinhu matsva. Ino inguva yakanakisa yekuzvigadzirisazve, kutora 180 degree kutendeuka uye uone kuti simba rako muhupenyu huno rinogona kuve rakakosha kune vamwe.
Vanhu vese vanofanirwa kunzwa nyaya dzekuchinja uye kugadzirisa, nekuti hapana imwe nzira irinani yekuona kuti zvese zvinogoneka, kupfuura kuburikidza nezvinoitika zvevamwe vanhu. Nekuti kana iye akarasikirwa nezvinhu zvese, kana mumwe wacho akaita tsaona yakachinja hupenyu hwake, kana paine vanhu vanowira kwakadzika zvekuti hapana anoziva kuti vakwanisa sei kubuda. Uye, kana paine vanhu avo, kubva mukuyedza mugaraji, vakakwanisa kugadzira chinhu chakakosha kwazvo chezana ramakumi maviri nemasere, iro raizoshandura matauriro atinoita, kurangana, kubatana pasiteji yepasi rose, anokuudza kuti uri haukwanise? kuita zvakafanana.
Iwe chete ndiwe unokwanisa kuzviongorora uye uone kuti ndeyipi miganhu yako. Unogona kudzidza zvese izvi kuburikidza nehurukuro nemisangano iwe yaunowana muchikamu chino chakadanwa nenzira imwecheteyo, misangano. Izvi zvakafanana zvinonzi Indaneti, ndizvo zvinotipa mukana wekudzidza nekutsvaga misangano yepasirose yepamusoro. Nekudzvanya kamwe chete, unogona kuwana zviwanikwa zvisingaverengeki zvemahara.
Misangano yakakosha zvikuru uye haigoneke kuvanhu vazhinji, dzimwe nguva nekuda kwemutengo wezvehupfumi, vamwe nekuda kwekuoma kwekusvika kunzvimbo yavakachengetwa. Nekuti muchikamu chino iwe unowana maconferensi nenyanzvi mune zvehupfumi, mararamiro, kurudziro uye kunyangwe vanhu vanobatsira vamwe vanhu kuchinja hupenyu hwavo kuburikidza nezvavanosangana nazvo. Nekuti kuburikidza nemazwi evanhu ava, unogona kuwana chimwe chinhu icho munhu wese asingazive, uye ndiko kuti kugona kwemunhu hakuna miganho.
Kune misangano isingaverengeke pane dzakasiyana nhaurwa dzinogona kuwanikwa paInternet, idzo dzinogona zvirokwazvo kutyisa nekutyisidzira kana iwe usingazive kwekutarisa. Naizvozvo, isu tinoita iro basa iwe uye Isu tinokupa iwe mazita nematanho avo akananga kuitira kuti kusvika kumisangano iyoyo kuve nyore sezvinobvira. uye nyore munyika. Paunenge iwe wawana huwandu hwenyaya dzenyaya, zviitiko uye nyaya dzekukunda izvo zviripo mukati menyika yemisangano, zvichave zvakaoma kwazvo kuti iwe usade kuvanzwa vese uye pane imwe nguva, pupurira mumwe wavo anorarama.
Maitiro ekugadzira inokwezva PowerPoint
Kana iwe uchifanira kugadzira mharidzo yePowerPoint uye iwe usingade kuti vateereri vavate kana kuti vanofinhwa, saka ...
Mhando dzinonyanya kushandiswa dzekupokana
kubudikidza Jose Miguel inoita 4 makore .
Izvo zvakakosha kuti isu tidzidze kuve nekwaniso inokwanisika kuti tikwanise kukakavara nekudzivirira mazano edu tisingafanire kutsvaga ...
21 yemahara inokurudzira hurukuro iyo inogona kuchinja hupenyu hwako
Heano makumi maviri neshanu anokurudzira musangano mavhidhiyo ayo zvechokwadi anotora mari yakawanda kuenda kune chero awo. Thanks to…
Uyu murume ane vana vana anotiudza zvine kuseka kukuru nezve zvaakasangana nazvo sababa
Ini ndinokurudzira iwe musangano uyu wakagadzirwa mune dzakateedzana hurukuro dzakanzi "Kutarisira Vana." Zvirokwazvo zvinokuwanira iwe zvakawanda zve ...
4 inokurudzira TED Kutaura kuti ikubatsire kupfuura panguva dzakaoma
Tese isu tinofanirwa kubata nemanzwiro ekukundikana, kusurukirwa, kushungurudzika, nezvimwe. Dzimwe nguva tinotadza kutarisa, kudzikama ...
Anotitaurira mumaminetsi matatu kuti zvinorevei kugara neO Obsessive Compulsive Disorder
Zita rake ndiDamián Alcolea, mutambi wechiSpanish uye anotambura nekunyanyisa kusagadzikana kusagadzikana. Ichi chirwere chepfungwa chinoremadza zvakanyanya. On…
Musangano uyo wakachinja chip yangu
Nhasi ndiri kukuzivisa iwe kune mukomana uyo kubva mumaonero angu ari wechokwadi anokurudzira. Inodanwa…
Nemaminetsi gumi chete pazuva iwe unogona kufara kwezuva rese
Ini ndinokukoka iwe kuti utarise ino pfupi musangano weTED mavanotidzidzisa chimwe chezvikonzero zveedu ...
Musangano watinokokwa kuti ufungisise nekutora nhanho kumashure
Kudzidzira kufungisisa kunotakura zvakateerana zvakabvumikiswa nesainzi, izvi hazvina mubvunzo ... pakupera kwechinyorwa ini ndinokusiira imwe ...
Unyanzvi hwekukanganisa kutarisisa kwemunhu [Chidzidzo]
Apollo Robbins musanganiswa wemutambi, mutauri, uye chipangamazano. Chii icho chinoita kuti uve akakosha? Kugona kwako ku ...
Akanga achangosvitsa makore 17 ndokuburitsa zvakavanzika zvake zvitatu zvekurarama tichifara
Iye protagonist yemusangano uyu unonakidza anonzi Sam Berns. Nehurombo akatofa (ingangoita mwedzi mitatu mushure mekuita izvi ...